भिडमा कहिले सम्म घुस्ने प्रियंका जी ? « Intro Nepal
भिडमा कहिले सम्म घुस्ने प्रियंका जी ?
Published On : ७ श्रावण २०७६, मंगलवार ११:०१
नायिका प्रियंका कार्कीको अभिनय रहेका पछिल्ला फिल्महरुले एकपछी अर्को फ्लपको शृंखला दोहोर्याइरहेका छन् । उनको अभिनय रहेको फिल्म सफल हुँदा पनि त्यसको सफलताको हकदार प्रियंका एक्लै बन्न पाएकी छैनन् । किनकी प्रियंकाले आफ्नै नामले फिल्म चलेको उदाहरण दिन सकेकी छैनन् ।
प्रियंकाको सोलो हिट फिल्मको पर्खाइमा बसेका दर्शकहरु प्रियंकालाई भिडमै हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् । उनले अभिनय यात्रामा एउटा पनि सोलो हिट फिल्म दिन नसक्दा पनि फिल्ममा उनको डिमाण्डमा भने कमी आएको छैन । डिमाण्डमा कमी नआएको भएता पनि उनको डिमाण्ड पछिल्लो समय आइटम गीत र छोटो भूमिका कि त मल्टिस्टारर फिल्मका लागी मात्र भएको देखिन्छ । के प्रियंकालाई लिडमा राखेर फिल्म निर्माण गर्न निर्माताहरु हच्किएको देखिन्छ ।
केही दिन अगाडी मात्र किरण केसीको निर्माणमा शिवहरी पौडेलको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘लक्का जवान’मा प्रियंका अनुबन्धित भएकी छिन् । तर, सो फिल्ममा पनि प्रियंका सोलो लिडमा हुने छैनन् । फिल्म निर्माण यूनिटले अझै लिड कलाकारको खोजि भइरहेको बताएका छन् । यस फिल्ममा पनि प्रियंका भिडमा नै सामेल भएकी छिन् । आखिर प्रियंका भिडमा कहिले सम्म घुस्लिन् ?
फोटो : प्रियंका कार्कीको फेसबुकबाट